विचार गर्नुस् , तपाईं कतै स्वार्थी प्रेममा पो हुनुहुन्छ कि ? | Nepal Ghatana
विचार गर्नुस् , तपाईं कतै स्वार्थी प्रेममा पो हुनुहुन्छ कि ?
प्रकाशित : २ भाद्र २०७६, सोमबार १८:५१
वैंशालु उमेरमा युवा र युवतीबीच एकअर्कामा आर्कषण हुन्छ । त्यही आकर्षण सम्बन्धमा बद्लिन्छन् । र, प्रेममा । प्रेम सम्बन्धमा रहेपछि उनीहरुको जीवन फरक मोडबाट गुज्रन थाल्छ । भेटघाट, कुराकानी, डेटिङ । जति-जति उनीहरु घनिष्ठ हुँदै जान्छ, एकअर्कासँग खुल्दै जान्छन् । अन्ततः उनीहरु यस्तो मोडसम्म आइपुग्छन् कि दुबैबाट अब लुकाउनुपर्ने केही बाँकी रहँदैन ।
कतिपय पार्टनर चाहिं एकदमै नकारात्मक हुन्छन् । जब यस्ता पार्टनरसँग प्रेम सम्बन्ध रहन्छ, त्यसबाट बाहिर आउन निकै मुश्किल हुन्छ । उनीहरुसँग प्रेम सम्बन्धमा रहँदा पनि वैशालु रोमाञ्चकता अनुभव हुँदैन । उनीहरु कुनै न कुनै निहुँबाट पीडा दिने खालका हुन्छन् । यस्ता प्रेमीरप्रेमिकाले तपाईंलाई खुसी र उमंग होइन, दुःख दिन्छ । निरास तुल्याउँछ । तनाव दिन्छ । तपाईंको खुसी पनि यस्ता प्रेमीरप्रमिकाले खोसिदिन्छ ।
यस्ता पार्टनर धेरै भड्किलो र धेरै नै अपेक्षा गर्ने किसिमका हुन्छन् । उनीहरुको अपेक्षा कहिल्यै पुरा पनि हुँदैन । जुनसुकै कुरामा खोट देखाउने गर्छन् । केही गरेर उनीहरुको चित्त बुझाउन सकिदैन । यस्ता प्रेमिकारप्रेमी फरक स्वार्थले तपाईंसँग जोडिएका हुन्छन् । यसलाई ‘टक्सिक रिलेसनसिप’ भनिन्छ । यस्ता पार्टनरसँग भने जतिसक्दो सम्बन्धमा पूर्ण विराम लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । एजेन्सी